တင်းမာမှုကြားက မျှော်လင့်ချက်မဲ့ဆဲ ကချင်ဒုက္ခသည်များ | ဧရာဝတီ
တင်းမာမှုကြားက မျှော်လင့်ချက်မဲ့ဆဲ ကချင်ဒုက္ခသည်များ
နန်းသီရိလွင်| November 24, 2012 | Hits:73
23 | | မထင်မှတ်ဘဲ ရွာချလိုက်တဲ့ ဆောင်းတွင်းမိုး ဖွဲဖွဲစိပ်စိပ်ကြားမှာ အပြာရောင် မိုးကာမိုး၊ ၀ါးထရံဖြစ်သလို ကာရံထားတဲ့ တဲကုပ်ကုပ်လေးတွေ ငြိမ်သက်နေတယ်။ ညနေစောင်းလာလေ အအေးဓာတ်က ပိုလာလေဆိုတဲ့ ဒေသမှာ မိုးကလည်း ရွာ၊ အအေးဒဏ်က ကာကွယ်စရာ မီးဖိုကလွဲလို့ ဘာမှ မရှိပါဘူး။
နေရာက တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်အနီး၊ တရုတ်နိုင်ငံဘက်အခြမ်း ယူနန်ပြည်နယ်ထဲက ယင်ဂျန်းဆိုတဲ့ မြို့ကနေ ၆ နာရီလောက် ကားစီးရတဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသ တနေရာမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်း ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဂါးယန်လို့ ခေါ်တဲ့ အဲဒီနေရာမှာ ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ဘေးဒုက္ခကြောင့် ထွက်ပြေးလာတဲ့ ကချင်ဒုက္ခသည် ၂၀၀၀ ကျော် နေထိုင် ခိုလှုံလျှက်ရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ရေပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၅ ထောင်ကျော်မှာ တည်ရှိပြီးတော့ မဂါးယန်ကို သွားဖို့ လမ်းရယ်လို့ မည်မည်ရရမရှိဘဲ တရုတ်နိုင်ငံက သစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ သစ်ထုတ်လမ်းကို အသုံးပြုနေရပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေ အများစုကလည်း သစ်ထုတ်လုပ်ရေး လမ်းရဲ့ လမ်းဘေးတဘက်တချက် တောင်စောင်းတွေမှာ ဖြစ်သလို တဲထိုးနေထိုင်နေရပါတယ်။
“လမ်းပန်း ခက်ခဲတော့ အကူအညီပစ္စည်းက မရောက်လာတာ များတယ်။ အဓိက စားရေးအတွက်ပဲ အလျဉ်မီအောင် လုပ်နေရတယ်။ ကျန်တာကတော့ ဖြစ်သလိုပဲ ဖြေရှင်းလိုက်တာ များပါတယ်” လို မဂါးယန် ဒုက္ခသည်စခန်းက စခန်းတာဝန်ခံတဦး ကပြောပါတယ်။
မဂါးယန်ကို ရောက်ဖို့ တရုတ်နိုင်ငံ ယင်ဂျန်းကနေ ခါ့ရှန်ဆိုတဲ့မြို့ကို ကားနဲ့သွားနိုင်ပြီးတော့ ခါ့ရှန်ကနေ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီနဲ့ ခရီးဆက်မှ ရမှာပါ။ လမ်းခရီးက ကားလမ်းမဟုတ်တဲ့ သစ်ထုတ်လမ်းဖြစ်တဲ့အပြင် တောင်တက်လမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရွာနေရင် ကားလမ်းချော်မှာ မြေပြိုမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျမတို့ဆီလာဖို့ ခက်တဲ့အတွက် တော်ရုံအဖွဲ့အစည်း မလာပါဘူး။ အဓိက ဆန်နဲ့ ဆေးဝါးကို KBC (ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အဖွဲ့ချုပ်) နဲ့ KIO က ပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ထက်က ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေ ရှိနေတယ်။ ကျမတို့ ဆန်နဲ့ ဆေးဝါး ရတယ်။ တချို့ နေရာတွေမှာ ဆန်နဲ့ဆေးဝါးမပြောနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးမယ့် ဆရာမတောင် မရှိပါဘူး” လို့ မဂါးယန်ဒုက္ခသည်စခန်းက တာဝန်ကျ ဆရာမ မသိန်းဝမ်က ပြောပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လကတည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော်နဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကချင်ပြည်သူ ၁ သိန်းနီးပါး နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသူများအဖြစ် ဒုက္ခသည်စခန်းများမှာ ခိုလှုံနေကြရပါတယ်။ ဒုက္ခသည် ၁ သိန်းနီးပါးလို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ အထဲက ၆ သောင်းကျော်ဟာ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နယ်မြေများအတွင်းမှာ နေထိုင်နေကြရပြီးတော့ ၃ သောင်းကျော်ကတော့ အစိုးရ ထိန်းချုပ်နယ်မြေများမှာ တည်ရှိနေပါတယ်။
တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်တဲ့ ဒေသတွေက နီးစပ်ရာ လုံခြုံမယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ဒေသတွေကို အသက်လုပြေးရတဲ့အတွက် စစ်ပြေးသူအများစုဟာ ပစ္စည်းများများစားစား မသယ်နိုင်သလို နေရာရွေးခြယ်ခွင့်လည်း မရှိကြပါဘူး။ KIA ထိန်းချုပ် နယ်မြေဘက် ရောက်သွားတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို KIA, တရုတ်အစိုးရနဲ့၊ တခြားသော လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတချို့က ထောက်ပံ့သလို၊ မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော်ဘက် ရောက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကိုလည်း ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ NGO, INGO တွေက အကူအညီပေးနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ၊ လုံခြုံရေးအခက်အခဲကြောင့် ကူညီထောက်ပံ့မှု လိုအပ်သလောက် မရဘဲ အခက်အခဲကြီးကြီးမားမား ကြုံနေရတဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေလည်း အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
“လမ်းသာတဲ့နေရာတွေ ဥပမာ မြစ်ကြီးနား၊ ၀ိုင်းမော် လာတာများတယ်။ ကန်ပိုက်တီးမှာ ဆင်ကြိုင်ဆိုတာ တော်တော်လေး ချို့ချို့တဲ့တဲ့နေရတဲ့ စခန်းတခုရှိတယ်။ ကန်ပိုက်တီး တံတားက ကျိုးသွားတော့ စက်သီးနဲ့ ကူးရတယ်။ တခါတည်း လုံလုံလောက်လောက် လာလှူကြဖို့ ဦးဇော်ဇော်တို့၊ ဦးအောင်ကိုဝင်းတို့ အဲလိုလူတွေကို မေတ္တာရပ်ခံရတယ်” လို့ ကချင်ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီး ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ စာရင်းအရ အစိုးရ ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘက်မှာ ဒုက္ခသည်စခန်း စုစုပေါင်း ၈၄ ခုရှိပြီး စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ဦးရေ ၃၁၆၂၅ ဦးအထိ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြစ်ကြီးနား၊ ၀ိုင်းမော်၊ ဗန်းမော်၊ ရွှေကူ၊ လွယ်ဂျယ်၊ မိုးကောင်း၊ မိုးညှင်း စတဲ့ ဒေသတွေက လမ်းသာတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းက လူမှုရေးအဖွဲ့ငယ်များရဲ့ ထောက်ပံ့မှုရော၊ ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့ တခြားအထောက်အပံ့များကို အခက်အခဲမရှိ ရယူနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကန်ပိုက်တီး၊ ပန်ဝါ၊ မိုးမောက်၊ မံစီ စတဲ့ ဒေသတွေဟာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေတွေကြောင့် အကူအညီပစ္စည်းတွေ ပို့ဖို့ ခက်နေတယ်လို့ ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဆိုပါတယ်။
“ပန်ဝါမှာက တိုက်ပွဲက အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတော့ မသွားရဲကြဘူး။ မံစီလို နေရာမျိုး ကျတော့လည်း ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ သွားမှရမယ့် နေရာမျိုးတွေရှိတယ်။ အဲဒီအပြင် ကူညီထောက်ပံ့ဖို့က အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ ရနေတော့ ကိုယ်လက်လှမ်းမီတဲ့ နေရာတွေမှာကိုပဲ မလောက်ငနိုင်တဲ့အတွက် ပိုဝေးတဲ့နေရာကို ဆက်သွားဖို့က အခက်အခဲအများကြီး ရှိပါတယ်” လို့ KIA က တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။
KIA နဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) က ကောက်ယူထားတဲ့ စာရင်းတွေအရ KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းစုစုပေါင်း ၂၁ ခုထိရှိပြီး လူဦးရေက ၆၃၅၀၀ ခန့် ရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။ KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းက ဒုက္ခသည် အများစုကတော့ KIA ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ လိုင်ဇာ အနီးတ၀ိုက်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တလျှောက်မှာ လို့သိရပါတယ်။ လိုင်ဇာ အနီးတ၀ိုက်က ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကိုတော့ KIO က လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ဒုက္ခသည် ကလေးများရဲ့ပညာရေးအတွက် ကျောင်းဆောက်ပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နယ်စပ်တလျှောက်မှာတော့ KIO ရဲ့ အကူအညီအပြင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကူအညီတချို့လည်း ရရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“တရုတ်က တိုက်ရိုက် ကူညီတာမျိုးတော့ မလုပ်ဘူး။ ဘာသာရေးအရ ကူညီပါတယ်။ KBC လို အဖွဲ့တွေက တဆင့်လှူတယ်။ နောက် ပြည်တွင်းက အဖွဲ့လေးတွေလည်း ဒီကို လှူတာတွေ ရှိပါတယ်။ အထောက်အပံ့များလို့ ကျနော်တို့မှာ လောက်ငှတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လိုအပ်ချက်က အမြဲ အဆိုးဆုံးအဆင့်မှာ ရှိနေတယ်” လို့ လိုင်ဇာအနီး ဂျယ်ယန်း ဒုက္ခသည်စခန်းက တာဝန်ခံ ဦးဘရန်ရှောင်က ပြောပါတယ်။
KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းက နမ်ခမ်ဂျော်စခန်း၊ ပလောင်စခန်း၊ မဂါးယန်စခန်း စတဲ့စခန်းတွေနဲ့ ပါဟောင်၊ လူဟောင် စတဲ့ ဒေသတွေမှာ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေရှိနေပြီးတော့ မြန်မာတပ်မတော် အစိုးရဘက်က တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် မှတ်တိုင် ၆၊ မှတ်တိုင် ၈ ဒေသတွေဟာ အလွန်အေးတဲ့ ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အခြေအနေ စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်က မအားခါန်က ပြောပါတယ်။
“ကျမတို့ဘက်က အထောက်အပံ့ မရောက်နိုင်တဲ့ နေရာတွေကို UNHCR (ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး)၊ KBC, KNFS လို အဖွဲ့တွေကတဆင့် ထောက်ပံ့နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားတာနဲ့တော့ မတူနိုင်ဘူး။ KIA ဘက်ကိုလည်း ကျမတို့ အကူအညီပေးချင်ပါတယ်။ သူတို့က လက်မခံတာတော့ ကျမတို့လည်း မတတ်နိုင်ဘူး” လို့ ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဆက်ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး (KWAT) ကလည်း ကချင်ဒုက္ခသည်များအတွက် ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အကူအညီဟာ အခြေခံအစားအသောက် လိုအပ်ချက်ရဲ့ ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရရှိနေတယ်လို့ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ အစီရင် ခံစာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အစီရင်ခံစာမှာ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းက စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၆ သောင်းကျော်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီရဲ့ ၃ ရာခိုင်နှုန်းကို ကုလသမဂ္ဂမှ ရရှိပြီးတော့ ၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ နိုင်ငံတကာ NGO တွေဆီက ရရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
“ကချင်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် သွားလှူဖို့ လုံခြုံရေးအရ အဆင်မပြေဘူး။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာတွေက ဆင်ခြေတွေပါ။ တကယ်သွားနိုင် လုပ်နိုင်တဲ့ ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့် ထောက်ပံ့ရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” လို့ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ရက်မှ မအားခါန်က ဆိုပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွက် ပြည်တွင်းကနေ အဖြူရောင်တွဲလက်များ၊ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ရက်၊ စိမ်းရောင်စို (မန္တလေး)၊ ပန်းရဲ့လမ်း အစရှိတဲ့ အဖွဲ့တွေက ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အလှူငွေရှာဖွေတာ၊ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်လှူဒါန်းတာတွေကို လုပ်နေပါတယ်။
စစ်ပွဲကာလ တနှစ်ကျော်အပြီး စစ်ဘေး ပုန်းရှောင်သူတွေ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ပြန်ချင်ကြပေမယ့် မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော်ရော KIA နှစ်ဘက်စလုံးက စစ်ရေးအရ အလျှော့ပေးမယ့်ပုံ မပေါ်သေးပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ တရားဝင် တွေ့ဆုံမှုရော၊ တရားမ၀င် တွေ့ဆုံမှုပါဆိုရင် ၁၀ ကြိမ်အထိ လုပ်ခဲ့ကြပေမယ့် တိကျသေချာတဲ့ သဘောတူညီချက်မျိုး အခုအချိန်ထိမရသေးဘဲ တဖက်နဲ့တဖက် သံသယ ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကချင် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များ ART ဆေး ပြတ်လပ်နေ
3 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website naynay November 25, 2012 - 12:24 am	သတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းဖတ်နေပါတယ် သတင်းဦးကိုဖတ်ဖတ်နေရလို့တော်တော်လေးကြိုက်တယ်
Reply	yemyin November 25, 2012 - 4:58 pm	I would like to request both site Don’t foolish KIA and army.
Reply	ohnmar November 29, 2012 - 11:37 am	စစ်ပွဲတွေကပြီးဘဲမပြီးနိုင်တော့ဘူး။နှစ်ဖက်စလုံးကစစ်သားတွေကိုမေးလိုက်မယ်။